थोरै औषधिबाट सर्पदंशका बिरामीको उपचार - Tesro Ankha
थोरै औषधिबाट सर्पदंशका बिरामीको उपचार
चितवन । विगतको तुलनामा कम भाइल ‘एन्टिस्नेक भेनम’ले सर्पदंशका बिरामीलाई निको पार्न थालिएको छ ।
एक बिरामीलाई एक सय ६५ भाइलसम्म एन्टिस्नेक भेनम दिइने गरेकामा अनुसन्धानपछि ३० भेनम भन्दा बढी दिनु नपरेको पुष्ठी भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ ।
स्विजरल्यान्डको जेनेभा विश्वविद्यालयको सहयोगमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियनद्वय डा. विजय पौडेल, डा. कालिदास अधिकारी प्रा.डा. सन्जीव शर्मा र डा. छविलाल थापासमेतले अनुसन्धानको एक केन्द्र भरतपुर अस्पतालमा राखी उपचारको विधि र सर्पका जातिका विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए।
अनुसन्धानकर्ता डा. पौडेलका अनुसार झापाको चारआलीस्थित सैनिक क्याम्प र दमकको रेडक्रस कार्यालय एवम् चितवनको भरतपुर अस्पतालमा दुई वर्षसम्म गरिएको अनुसन्धानले पनि कम डोजको औषधिबाट बिरामी निको पार्न सकिने पुष्टि गरेकोे हो ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको यो एक भाइल औषधिको दुई हजार गरेकामा औषधिको मात्रा घटाउँदा सरकारको करोडौंँ रुपैयाँ बचत हुनाका साथै एन्टिस्नेक भेनमको अभाव नहुने पनि देखिएको छ ।
सर्पका जातका विषयमा पनि अध्ययन जारी छ । नेपालमा ८९ जातका सर्प पाइन्छ । जसमध्ये आठ जातका सर्प विषालुुु हुन्छन् । चितवन र आसपासका जिल्लामा बढी मात्रामा कोब्रा र करेत जातका विषालु सर्प देखिने गरेका छन् । बर्सेनि देशभरमा करिव २० हजार जनालाई सर्पले टोक्ने गरेकामा एक हजारको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सर्पले टोकेको पाँच मिनेटदेखि २४ घन्टाभित्रमा विषको असर देखापर्ने भएकाले समयमै अस्पताल पु¥याउन सकेमा बचाउन सकिने डा. पौडेलले बताए। भरतपुर अस्पतालमा मात्रै वार्षिक चारदेखि पाँच सयसम्म बिरामी आउने गरेकामा एक सय ५० देखि २०० जनालाई विषालु सर्पले टोक्ने गरेको उनले बताए।
सात वर्षअघि सर्पदंशको समयमै उपचार गर्न नसक्दा श्रीमती गुमाएका भरतपुर महानगरपालिका–८ का धर्म कार्कीले सर्पले टोक्दा एम्बुलेन्स नपर्खिकन जे/जस्तो साधन छ, त्यसमा राखेर सर्पदंशकै उपचार हुने अस्पताल पुर्याउन सके बचाउन सकिने बताए । श्रीमतीको मृत्युपछि उनले सर्पको टोकाइबाट अकालमा कोही मर्न नपरोस् भन्दै सचेतना अभियान थालेका छन् ।
२०७४ बैशाख १६ १०:३८